ZayPya New Version + Zapya တင်ပြီး Computer နဲ့ ဖုန်းကို ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မယ် ( Trick 2014 ) ~ (IT) ကိုထိုက်
ZayPya New Version + Zapya တင်ပြီး Computer နဲ့ ဖုန်းကို ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မယ် ( Trick 2014 )
3:18 AM Android No comments
Android Device မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ iDevice မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Zapya ဆိုတဲ့ File Transfer ဆော့ဝဲကို တော်တော်အသုံးပြုကြတယ်.. ဒါပေမယ့် ဖုန်းအချင်းချင်းသာ ဆက်သွယ်နေကြဆဲဖြစ်ပြီး ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုသူနည်းပါးပါသေးတယ်.. ဟိုတလောက Zapya For Windows PC ကိုတင်ပေးခဲ့ပါတယ်.. မသုံးတတ်လို့ဆိုပြီး ပြောပါတယ်.. အခု အခြေခံသမားတွေ နားလည်လွယ်အောင် ပြောပြပါမယ်.. ကွန်ပျူတာက Wireless Adapter ရှိတဲ့ Laptop ဖြစ်ရပါမယ်.. Desktop မှာ Wireless Adapter တပ်ထားပြီး လုပ်လို့ရသလားတော့ မသိ...
ပထမဆုံး ကွန်ပျူတာအတွက် Zapya ကို အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းပြီး Install လုပ်လိုက်ပါ။ 3.15 Mb ပဲရှိပါတယ်..
သင့်ဖုန်းမှာ ရော Zapya ရှိရဲ့လား.. မရှိရင် Android အတွက်တော့ အောက်ကလင့်မှာ Version အသစ်ထွက်တာလေး ဒေါင်းလိုက်ပါအုံး..
ပြီးရင်တော့ နှစ်ခုစလုံးမှာ Install လုပ်ထားပေါ့ဗျာ...
1. ကွန်ပျူတာက Zapya ကို Run ပါ.. ဒါဆိုရင် ကွန်ပျူတာနည်မည်နဲ့ Password ကို Zapya မှာ မြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်..
2. ဖုန်းက Zapya ကို Run ပါ.. android လည်းရတယ်. iOS လည်းရတယ်နှော်.. ဖုန်းမှာ Search and Join ကိုနှိပ်လိုက်ပါ.. ဒါဆိုရင် ဖုန်းမှာ အောက်ကလို -Win-ကွန်ပျူတာနာမည်-PC ဆိုတာကိုတွေ့ပါမယ်.. အဲဒါကိုနှိပ်ပါ.. Password တောင်းပါမယ်.. ကွန်ပျူတာ Zapya က Password ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ.. ဒါဆိုရင် ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာ အချိတ်အဆက်ရပါမယ်။
4. ဖုန်းက ကွန်ပျူတာကို ဖိုင်ပို့တာ လွယ်ပေမယ့် ကွန်ပျူတာက ဖုန်းကို ပို့တာတော့ Drag and Drop လုပ်ပြီးမှ ရွှေ့ပို့ရပါတယ်.. ကွန်ပျူတာမှာ ကိုယ်ပို့ချင်တဲ့ ဖိုင် Explorer ကိုဘေးချင်းယှဉ်တွဲဖွင့်ထားပြီး ဖိဆွဲကာ Zapya ထဲက ဆက်သွယ်ထားတဲ့ ပုံဆီရွှေ့ကာ လွှတ်လိုက်ပါ.. ဒါဆို ဖုန်းဆီ ရောက်သွားပါမယ်.
5. ကွန်ပျူတာရဲ့ Zapya မှာ Setting ချိန်ခြင်း
(က) ကွန်ပျူတာ Zapya ရဲ့ နာမည်နဲ့ Password တွေကို ကိုယ်ကြိုက်တာ ပြောင်းလို့ရပါတယ်.. ပုံထဲကလို Password နဲ့ Inbox ကြားက > လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ..
ပေါ်လာတဲ့ ဘောက်မှာ နာမည်နဲ့ Password ပြောင်းနိုင်ပါပြီ..
(ခ ) နောက်တစ်ခုက ကွန်ပျူတာ Zapy ထဲကို ပို့လိုက်တဲ့ ဖိုင်တွေကို ဘယ်မှာ သိမ်းမလဲဆိုတာကိုလည်း ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ပေးထားလို့ရပါတယ်.. သူ့မှာတော့ C:\_Document\_DewMobile\_Zapy ထဲကို အလိုအလျောက် သိမ်းပေးပါတယ်.. ဒါကို ပြင်ဖို့ အပေါ်နားလေးက Setting icon လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ပေါ်လာတဲ့အကွက်ထဲက Inbox Path ရဲ့ ညာဘက်က > ပုံလေးကိုနှိပ်ပြီး ကိုယ်ထားချင်တဲ့၊ သိမ်းချင်တဲ့နေရာကို ညွှန်းပေးနိုင်ပါပြီ..
ဒါဆိုရင်တော့ အခြေခံသမားတွေ သဘောပေါက်လောက်ပြီထင်ပါတယ်..